Ọkụ HD 10, Amazon mbadamba na-ọhụrụ ọzọ dị ike na amamiihe | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 26/05/2021 10:00 | General, Nyocha
Amazon na-aga n'ihu ịkụ nzọ na nchịkwa democratizing ọnụ ọgụgụ dị mma nke mpaghara yana ngwaahịa ya bụ isi, nke a bụ ka ụlọ ọrụ Jeff Bezos si malite ọtụtụ ngwaahịa na-aga nke ọma n'ihi nnukwu uru ha bara maka ego. N'ime ndị a, anyị nwere ndị ọkà okwu, akwụkwọ ntanetị na mbadamba mbadamba.
Nọnyere anyị ma chọpụta ihe kpatara mbadamba nkume ndị a dị oke ọnụ ahịa nke Amazon na-abụkarị ndị kacha ere ahịa na ihe ike ha nwere, ị nwere mmasị ịzụrụ ha?
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, anyị kpebiri isoro vidiyo anyị na-esonye anyị YouTube channel, Na vidio a ị ga-enwe ike ịhụ unboxing zuru ezu iji lelee ọdịnaya nke igbe nke Amazo Fire HD 10. N'ezie, anyị na-eme nyocha maka akụrụngwa, na njirimara nkọwa zuru ezu na ọbụlagodi ya ihuenyo na ndị na-ekwu ya, maka ihe vidiyo ahụ nwere ike ịbụ ezigbo nkwado maka ịgụ nyocha a. Echefula ya ma hapụ anyị ajụjụ ọ bụla na igbe igbe.
2 Nka na ụzụ na njikọta
3 Sistemụ nrụọrụ na ahụmịhe onye ọrụ
4 Ahụmahụ Multimedia
N'oge a, Amazon kpebiri na ọ gaghị ewepụta ihe ọ bụla ma ọlị, ụlọ ọrụ Jeff Bezos na-agbanye mgbe ọ bụla nwere ike ịmịpụta ihe na ihe ndị ọ bụ ezie na ha agaghị adọta uche anyị n'ihi nri ha, ha ga-eme ya n'ihi ezigbo nguzogide ha ịfụ na ọkọ. Otu ihe a mere na Fire HD 10 sitere na Amazon nke na-adọta na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ wee hapụ anyị ka anyị mechie mpụga iji soro ogologo oge, Matte ojii na ubé ike ike polycarbonate na naanị ọnụ ọchị logo na azụ nke a nnukwu mbadamba ruru ka ya size.
Amazon si Fire HD 10 slimmed ala ya gara aga mbipute ka 465 grams
Akụkụ: X x 247 166 9,2 mm
Anyị nwere akuku igwefoto dị n'azụ igwefoto, n'otu ụzọ ahụ njikọ na bọtịnụ niile dị n'akụkụ elu. ọdụ ụgbọ USB-C, ọdụ ụgbọ mmiri Jack 3,5 mm, bọtịnụ olu abụọ na bọtịnụ ike. Maka akụkụ ya, ihuenyo ihuenyo, nke na-adịghị egwupụta, nwere nhazi dị larịị nke na-enyere aka itinye ndị nchebe. Anyị nwere igwefoto maka oku vidiyo dị n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya kwụ ọtọ na akụkụ etiti etiti dị elu ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na-ahụ ya, dị ka ọ dị ka ebum n'uche.
Nka na ụzụ na njikọta
Na nkebi a, Amazon abughi nke ama ama maka itinye ihe ọhụụ na teknụzụ na ike maka ngwaike nke ngwaọrụ ndị a, mana maka ịnwa ịnye mmekọrịta siri ike n'etiti ogo na ọnụahịa. Na nke a, ha etinyela ihe nhazi okpukpu asatọ na 2,0 GHz onye anyị na-amaghị ụlọ ọrụ ya, ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ọ bụ MediaTek dị ka nyocha anyị si dị. Ram na-eto na 3 GB na mkpokọta mgbe ịkụ nzọ na nchekwa nke 32 GB ma ọ bụ 64 GB dabere na ụdị ahọrọ.
Iji jikọọ anyị nwere Dual band WiFi 5, nke gosipụtara na nyocha anyị nke ọma na netwọkụ abụọ nke 2,4 GHz na 5 GHz. Bluetooth 5.0 LE qGa-ahụ maka nnyefe ụda maka ekweisi na-enweghị eriri ma ọ bụ ndị na-ekwu okwu, niile n'echefughị ​​ọdụ ụgbọ mmiri ahụ Ogwe 3,5 mm na nke a Fire HD 10 na-agụnye na ya elu akụkụ.
Banyere igwefoto, 2 MP maka igwefoto n'ihu na 5 MP maka igwefoto azụ ga-enyere anyị aka ịpụ na nsogbu, nyocha akwụkwọ na ... obere ihe ọzọ.
Sistemụ nrụọrụ na ahụmịhe onye ọrụ
Dị ka ị maara nke ọma, ngwaahịa ọkụ nke Amazon, ma ha bụ mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ TV nwere smart, nwere nsụgharị ahaziri iche nke gam akporo nke lekwasịrị anya na ndị ọrụ Amazon. Anyị nwere Fire OS, ihe oyi akwa gam akporo nke na-enweghị Playlọ Ahịa Google, O sina dị, anyị nwere ike iwunye APKs site na mpụga ọ bụla anyị chere na ọ kwesịrị ekwesị, ebe ha ga-adaba kpamkpam. N'akụkụ nke ya, Sistemụ arụmọrụ enweghị bloatware karịrị ngwa mgbakwunye nke Amazon yana mmelite ya na ngwaike emetụtala oge ịnyagharịa karịa.
Maka akụkụ ya, anyị nwere ihe nchọgharị nwere ike ịka mma, nke ị nwere ike dochie ngwa ngwa na Chrome ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Na mgbakwunye, na ụlọ ahịa ngwa Amazon anyị nwere ike ịnweta nsụgharị nke Netflix, Disney + na ndi ozo nke ndi na enweta ihe nlere nke ndi audiovisual. Agbanyeghị, ana m ekwusi ike na ịwụnye APK sitere na mpụga bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ibu ọrụ, nke enweghị nsogbu ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, mbadamba nkume eji eme ihe doro anya na iri ọdịnaya, gụọ, chọgharịa ma ọ bụ lelee vidiyo. N'ihe banyere igwu egwuregwu vidio, anyị na-amalite ịchọta nsogbu ndị ọzọ na-arụ ọrụ, dịka enwere ike ịtụ anya site na ngwaike ahụ e kwuru n'elu.
Dịka anyị kwurula na mbụ, anyị na-elekwasị anya na anyị ga-eri ọdịnaya, yabụ ọ dị mkpa iji nyochaa arụmọrụ na-arụ ọrụ ndị a nke Amazon Fire HD 10. N'okwu a, ụlọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ha mụbara ihie ihuenyo site na 10% ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, ihe n'eziokwu na-achọpụta, na-eme ka ọ dịkwuo mma iji ya n'èzí. Agbanyeghị, ọ bụghị na anyị nwere nrịba ama pụrụ iche, nke gbakwunyere na enweghị ihe na-eche echiche na-egosi na anyị nwere ike ịnwe nsogbu na anyanwụ zuru oke, ihe na-agaghị adị na mbụ.
Size Ihuenyo: 10,1 inch
Mkpebi: 1.920 x 1.200 pikselụ (224 dpi)
Banyere ụda, anyị nwere set nke abụọ ọma-ekwu okwu nke ga-enye ndakọrịta na Dolby Atmos na mgbakwunye na kpochapụwo stereo. Ha na-arụ ọrụ karịa nke ọma ma na-enye nnukwu ụda ga-atọ ụtọ vidiyo, ihe nkiri na egwu.
Banyere obodo kwụụrụ onwe ya, na-enweghị ikike na Mah anyị nwere ike ịgwa gị na anyị nwere ụbọchị abụọ ma ọ bụ ụbọchị eji dị mfe, si otu a so ya USB-C mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na gụnyere 9W chaja nke Amazon nwere obi oma iji tinye na igbe. Na ngụkọta, ihe dị ka awa 12 nke oge ihuenyo.
Anyị na-achọta mbadamba 10,1 nke anụ ọhịa ahụ, ngwaike dị oke ọnụ yana ọnụahịa ya na onyinye na-adọrọ mmasị nke kachasị na-eri ọdịnaya, ma ọ bụ site na nyiwe nke Amazon n'onwe ya ma ọ bụ nke ndị na-eweta mpụga. Ọnụ ya ga-adị gburugburu 164,99 euro maka ụdị 32 GB na 204,99 euro maka ụdị 64 GB. Ọ bụ ezie na na onyinye a kapịrị ọnụ anyị nwere ike ịchọta mbadamba nkume ndị rụchara nke ọma na ọnụahịa yiri nke ahụ sitere na ụlọ ọrụ ndị dị ka Chuwi ma ọ bụ Huawei, nkwa na afọ ojuju nke Amazon nyere nwere ike ịrụ nnukwu uru n'okwu a. Ọ dị site na Mee 26 na weebụsaịtị Amazon.
Ihe na: Mee 26 nke 2021
Design na ihe e chere na-eguzogide
Sistemụ arụmọrụ na-enweghị bloatware
1GB karịa RAM na-efu
Ọnụahịa ahụ ga-adọrọ mmasị karịsịa na onyinye
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ọkụ HD 10, mbadamba nkume Amazon na-eme ka ọ dịkwuo ike ma na-egbukepụ egbukepụ